I-European Commission isayine i-ACTA | Kusuka ku-Linux
Ngosuku lwasemini 26 ngoJanuwari Unyaka wezi-2012 uzokhunjulwa njengosuku lomhla ka- I-European Commission kanye namazwe angamalungu e-European Union, isayine UMTHETHO. Ngiqonde ukuthi, usuku lapho bakwenza kwacaca ukuthi umbono wabantu awunandaba.
Umcimbi wokusayinwa ububanjelwe eJapan, izwe okuyisivumelwano esivumelanayo. Yize kungukusetshenziswa kabi kwamandla ngesihluku ngabamele abangaqokiwe beKhomishini yaseYurophu, lokhu akusho ukuthi isahluko se-ACTA sesifinyelele ukugcina.
I-ACTA yisivumelwano samazwe omhlaba, egameni eliphikisana "nomgunyathi" kodwa empeleni inemiphumela efana ne-SOPA.
UNgqongqoshe wePhalamende uMarietje Schaake eshicilelwe namhlanje ngo Reddit umyalezo ochaza ukuthi iPhalamende laseYurophu kuzofanele lisigunyaze lesi sivumelwano noma kunjalo.
Ukusayinwa kwe-ACTA kumane kungukuzibophezela ngaphandle kokuvunyelwa ngokomthetho okutholwe amazwe axoxisanayo. Isiginesha izwakalisa inhloso yokusebenzisa lesi sivumelwano kepha akusho ukuthi iyamukelwa noma iqinisekiswe.
Ngokusho kwelungu lePhalamende uShaake, njengoba kusayinwa i-ACTA, amakomidi ahlukene ePhalamende laseYurophu kuzofanele aveze umbono wawo ngalokhu futhi axoxisane nawo ngokugcwele ngoFebhuwari 29 noMashi 1. Phakathi kuka-Ephreli noMeyi, i-INTA, i-International Trade Commission nayo izovota.
Kuyafaneleka ukuthi i-INTA yenze ucwaningo lwe-ACTA olwembula ukuthi "imvume engenamibandela esivumelwaneni kungaba impendulo engafanele" ngoba ayimeleli nzuzo yezakhamizi.
Ukufinyelela manje kuyazama ukuqoqa amasiginesha ayisigamu sesigidi izakhamizi zase-Europe eziphikisana ne-ACTA… iqhaza!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-European Commission yasayina i-ACTA
Lokhu kuya kubheda futhi kubi: S
Le intanethi esabekayo izomisa ukuqhuma kwayo: S
Okuhlekisayo ukuthi uClaro unikeza i-inthanethi amamegabhayithi angama-50, kungani ngithi …… ..?
ngayo yonke le mithetho okufanayo kuzoba nama-56 Kbps kunalawo ma-50 Mbps.
IGen X kusho
Bangabanye obala abakhotha ebhuthini, bekhuthazwa yimali eshiywe yibhizinisi lamazwe omhlaba kanye nama-monopolies ... bayanyanyisa, isibonelo esiphelele sokuthi abantu bangaba yinhlekelele kangakanani, ngaphandle kokuhlambalaza. abawenzi umsebenzi wabo, bahlale bevuna lowo onemali….
Phendula kuGen X